Zanu PF Yokurudzira Kutambirwa kweBumbiro Idzva paReferendamu
Bato reZanu-PF rinoti riri kukurudzira vatsigiri varo kuti vavhotere bumbiro idzva pareferendamu ichaitwa gore rinouya. Mutevedzeri wemutungamiri weZanu PF, Amai Joice Mujuru, vakaudza vatsigiri vebato ravo neSvondo kuBindura kuti vanofanirwa kutsigira bumbiro idzva.
Amai Mujuru vakataura mashoko aya kunyange hazvo chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva chisati chapera. Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuMDC panyaya iyi sezvo mutauriri webato iri, VaNelson Chamisa, vanga vachiti vakabatikana.
Mutauriri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vanoti bato ravo riri kuda kuzadzisa zvakabvumiranwa zvekuti munyika muve nebumbiro idzva pasati paitwa sarudzo.
Ukuwo komiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva inoti ichange iri muHarare kuzoita misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu mukupera kwesvondo. Komiti iyi inoti mapurisa akabvuma kunge achichengetedza runyararo pachange pachiitwa chirongwa ichi muHarare.
Mumwe wemasachigaro, eCOPAC, VaDouglas Mwonzora , vanoti mapurisa atanga kuferefeta kuti ndivanini vakakonzera mhirizhonga muna Gunyana iyo yakaita kuti chirongwa ichi chimiswe.